Ahoana ny fomba fampidinana iTunes amin'ny Linux | Avy amin'ny Linux | Avy amin'ny Linux
Apple isan'andro very izay very majika kelyRaha ny hevitro), na izany aza, maro no manana a iPhone, iPod o iPad ary mampiasa izy ireo iTunes ho toy ny fitaovana voalohany handefasana mozika, sarimihetsika ary angona hafa avy amin'ny solosainao mankany amin'ny fitaovana finday. Toy izany koa, iTunes no fampiharana tonga lafatra hividianana na hihainoana mozika Apple Music. Ary tena tsara ho an'ny mpampiasa Mac OS sy Windows, izay samy manana kinova iTunes. Fa ahoana ny Linux? ¿Misy iTunes ho an'ny Linux?
Ny valiny tsotra indrindra dia tsia. Apple dia tsy manana kinova iTunes izay afaka mandeha amin'ny Linux. Saingy tsy midika izany fa tsy afaka mihazakazaka iTunes amin'ny Linux ianao, fa kosa misy fomba fiasa sasany tokony hatao mba hampandehanana azy.
1 Ampidiro amin'ny iTunes i iTunes
2 Ampidiro ao amin'ny VirtualBox ny iTunes
3 Solon'ny iTunes amin'ny Linux
4 Hanafaka iTunes ho an'ny Linux ve i Apple?
Ampidiro amin'ny iTunes i iTunes
Ny fomba tsara indrindra hampandehanana azy iTunes amin'ny Linux es Divay, programa iray izay manampy sosona mifanentana ahafahanao mihazakazaka programa Windows ao amin'ny Linux. Raha hametraka iTunes amin'ny divay dia tsy maintsy manaraka ireto dingana manaraka ireto ianao:
Mametraka divay. Ho an'ity dia azonao atao ny mampiasa ireo fonosana fametrahana ho an'ireo distro isan-karazany izay azonao atao eto.
Hamarino raha tsy mila fitaovana hafa ny kinova Linux anao mba hahafahana mametraka iTunes na ny fisie ao anatiny. Fitaovana izay anoloranay hevitra hapetraka satria ilaina ny mametraka iTunes dia PlayOnLinux .
Sintomy ny kinova iTunes farany avy amin'ny Eto (iTunes 12.5.4 dieny izao), na dia manana olana aza ianao amin'ny fametrahana azy amin'ny divay, azonao atao ihany koa ny misintona kinova taloha eto.
Mihazakazaha ny installer iTunes amin'ny tsindry roa sosona, hametraka toy ny mahazatra ao amin'ny Windows izy.
Ankafizo iTunes amin'ny Linux, haingana sy mora.
Ity fomba ity dia mety tsy mandeha amin'ny distro Linux tianao indrindra, notsapako manokana tamin'ny Linux Mint 18.1 sy Zorin Os Ultimate.
Ampidiro ao amin'ny VirtualBox ny iTunes
Ny fomba faharoa ahazoana iTunes ho an'ny Linux dia tsy dia be mpitia nefa tokony handeha tsara.
Mila io fomba io mametraka VirtualBox. VirtualBox dia fitaovana virtualization maimaim-poana izay maka tahaka ny fitaovana ara-batana amin'ny solo-sainanao ary mamela anao hametraka rafitra sy programa miasa ao aminy. Io dia ahafahanao, ohatra, mihazakazaka Windows avy amin'ny Linux.
Tsy maintsy manana kinova Windows eo an-tànana ianao hametrahana ao amin'ny VirtualBox (mety mila kapila fametrahana Windows io). Ary araho ny dingana manaraka:
Sintomy ny VirtualBox ho an'ny fizarana Linux anao.
Mametraka VirtualBox amin'ny Linux
Mihazakazaha VirtualBox ary araho ny torolàlana eo amin'ny efijery mba hamoronana milina virtoaly Windows. Mety mitaky kapila fametrahana Windows io
Aorian'ny fanombohan'ny Windows, sintomy ny iTunes avy Eto (iTunes 12.5.4 dieny izao).
Mametraka iTunes amin'ny Windows amin'ny fomba mahazatra.
Raha ny marina amin'ity fomba ity dia tsy mihazakazaka iTunes amin'ny Linux ianao, fa manome ny fidirana amin'ny iTunes sy ny fiasa avy amin'ny solosaina Linux.
Ireo fomba roa ireo dia somary tsy mitombina ihany, saingy ireo no vahaolana tsara indrindra mandra-pamoakan'i Apple ny kinovan'ny iTunes ho an'ny Linux.
Solon'ny iTunes amin'ny Linux
Na dia iTunes aza no rindrambaiko tsara indrindra hampifanarahana haino aman-jery eo anelanelan'ny fitaovana finday sy solosaina Apple, amin'ny Linux dia misy fomba maro hafa hanovana an'ity rindrambaiko ity, izay mety mahafeno ny fepetra takiana ilainao.
Anisan'izy ireo azontsika atao ny manasongadina:
Es ny mpilalao mitovy indrindra amin'ny iTunessatria manana endri-javatra be dia be ao izy ary ahafahanao mampifandray iPod sy fitaovana haino aman-jery hafa amin'ny tranomboky mozika sy horonan-tsary.
Izany dia mpitety mozika matanjaka, afaka manasokajy / mikaroka mozika amin'ny endrika efa fantatra rehetra, ao anatin'izany ny audio streaming, afaka milalao sy mandoro CD sy DVD.
Iray amin'ireo singa manandanja indrindra amin'ny Rhythmbox ny fanohanana atolotra ho an'ny iPods, soloina iTunes tanteraka.
Izy io dia mpilalao mozika manana endri-javatra lehibe, izy io no heverina ho matanjaka indrindra azo ampiasaina amin'ny Linux.
Amarok ahafahanao mamindra rakitra amin'ny iPod sy mpilalao mp3 hafa, mividy mozika ara-dalàna, mamorona playlists mavitrika, manafatra angon-drakitra avy amin'ny iTunes, ary maro hafa.
Hanafaka iTunes ho an'ny Linux ve i Apple?
Izany rehetra izany dia mitarika antsika amin'ny fanontaniana: Hanafaka kinova iTunes ho an'ny Linux ve i Apple?Amin'ny ankapobeny, Apple dia tsy mamoaka kinova amin'ireo fandaharan'orinasa voalohany ho an'ny Linux, noho izany dia miahiahy aho fa hahita iMovie na iTunes ho an'ny Linux isika.
Amin'izao fotoana izao miaraka amin'ireo fiovana farany avy any Microsoft, ireo torolàlana vaovao an'ny Apple sy ny fitomboan'ny fampiasana Linux, mety eo am-panomanana ny famoahana iTunes ho an'ny Linux na fampiharana na fomba mahomby kokoa izahay hampifanarahana ny iPhone amin'ny solosaina miaraka amin'ny Linux .
loharanom-baovao: askUbuntu & lifewire
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » Tutorials / Manuals / Tips » Ahoana ny fampiasana iTunes amin'ny Linux
KernelPanicEs dia hoy izy:
Androany dia tsy misy fomba hametrahana iTunes amin'ny linux na amin'ny lalaovina amin'ny linux, miaraka amin'ny boaty Virtual dia mihemotra ary tsy mamela ny fampifanarahana sy ny fitantanana ny mozika iPhone amin'ny banshee na rythmbox miaraka amin'ireo kinova IOS vaovao dia tsy azo atao. Tahaka ny androany dia afaka mahita ny sarin'ilay fitaovana isika ary indraindray tsy mahomby mihoatra ny zavatra hafa rehetra. Efa nanandrana ny fomba rehetra notananao ve ianao?
Valiny amin'ny KernelPanicEs
Efa nanandrana ireo fomba 2 aho, samy manao izany amin'ny kinova taloha amin'ny kinova farany azonao sintonina eto http://www.oldapps.com/. Manana ipod nano aho (angamba zavatra taloha ho an'ny teknolojia izay tantanana amin'izao fotoana izao, fa raha izany dia mety amiko tsara).
Mampalahelo fa efa ela aho no niandry iTunes ho an'ny linux. Ary sahala amin'ny TeamViewer, Skype, sy ny maro hafa, ny fanohanana dia tsy hijanona ho antonony.
Nihevitra ihany koa aho fa amin'ny Android dia hanatsara ny fanohanana rehetra nefa tsy nisy niova. Manantena aho fa hampiasa an'io SteamOS io izy ireo, ho kely indrindra ho an'ireo mpitantana ...
Miaraka amin'ireo kinova farany an'ny Ubuntu sy ny derivatives-ny, tsy farafaharatsiny afaka nilalao rakitra mp3 avy amin'ny iPod touch mandeha koa aho. Ao amin'ny mint 17.2 sy 3 amin'ny alàlan'ny fanamafisana raha azo atao ny mamerina, ireo rakitra ireo; tsy misy zavatra hafa.
Antenaina indray andro any fa maro no hahatsapa fa i Apple no homamiadana lehibe indrindra amin'ny informatika ...
DDOc dia hoy izy:
Gtkpod ary tsy misy olana amin'ny iPod mahazatra.
Valiny amin'ny DDOc
Ho fantatsika izany, antenaina fa hahatratra ny Linux indray andro any, sarotra izany, nefa, tsy azo atao izany
Nanoratra an'ity ianao 4 taona lasa izay ary mbola tsy nanao na inona na inona izy ireo.
Zavatra mora toy ny fitaterana iTunes mankany Qt na GTK.
Microsoft dia nanao azy tamin'ny Skype ary ireo Apple bums ireo dia tsy nanetsika rantsan-tànana tao anatin'ny 4 taona mba hahafahan'ny mpampiasa Linux mampiasa iPod.
EridStiarts dia hoy izy:
tena tsara, raha ny amiko dia manana izao fisalasalana izao aho:
Mampiasa iTunes matetika aho satria efa nandany taona vitsivitsy aho vao nanao playlist lisitra fanao amin'ny mozika rehetra ananako. Rehefa niova tamin'ny Mac iray ka lasa iray hafa dia ampy ho ahy ny mandika ireo rakitra rehetra ao anaty folder iTunes avy amin'ny solosaina taloha mankany amin'ilay solosaina vaovao, mba hiseho ho azy ireo playlist rehetra rehefa noforonina.
Mety misy mifanaraka amin'ireo playlists efa noforoniko ao amin'ny iTunes ve ny iray amin'ireo programa izay manohana ny lisitry ny tena manokana ireo ary hanaiky azy ireo ho azy rehefa mandika / mametaka ireo rakitra?
MISAOTRA BE ho an'ny lahatsoratra, efa tena manampy azy io.
Mamaly an'i EridStiarts